Dood ka aloosan xisbiga FP xubnihiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Torkild Strandberg, Linda Nordlund iyo Jan Björklund. Sawirle: TT.
Dood ka aloosan xisbiga FP xubnihiisa
Dhimista tirada soo-galootiga
La daabacay onsdag 4 februari 2015 kl 15.36
Aad ayay u soo muuqaneeysaa kala qaybsanaanta xisbiga Shacabka, Folkpartiet ey xubnihiisu ku kala jaban yihiin siyaasaddda xisbiga ee soo-galootiga. Qaar ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga ayaa maanta maqaal ku soo ban-dhigey fikir la xiriira in la xadido tirada soo-galootiga dalka qaxa ku timaadda, isla-markaana loo baahan yahay tirada saqafka ugu sarreeya, sida uu qabo, Torkild Strandberg, kana mid ah siyaasiyiinta xisbiga FP ee hoggaanka deegaanka Landskrona, isla-markaana ka mid ah xubnaha hoggaanka golaha dhexe ee xisbiga.
- Saqafka iminka maahan mid aannu qaadi karno. Saxanka waxaannu dooneynaa inaannu dhanka kale u rogno oo halkii dawladdu go'aan ka gaari lahayd tirada soo-galootiga ee dalkani qaabili karo oo dabadeed degmooyinku meeleeyn lahaayeen, waxaa loo baahan yahay inuu laga heshiiyo tirada suurtagalka ah ee degmooyinku hab-sami u qaanili karaan, sida uu sheegay Torkild Strandberg.
Habkee ayaa lagu dhimi karaa soo-galootiga qaxa dalkan ku yimaada?
- Habka ay dawladdu u shaqeeuyn doonto maahan mid aniga i saaran inaan ka warrammo. Dhanka kale hayadda socdaalka ayaa saadaalinteedii ugu dambeeysay ku caddeeysay iney dadyoow gaarsii-san 90 000 oo ruux ey qax k uiman doonaan sannadkan 2015.
Siyaasiyiinta afarta ee xubnaha ka ah xisbiga FP, kuwaasina oo saaka maqaalka ku qoray war-geeyska Dagens Nyheter ayey saddex ka mid ahi xubno ka yihiin golaha sare ee hoggaanka xisbiga, kuwaasina oo aan caddeyn tirada qaxootiga ee loo baahan yahay in la dhimo iyo habkii loo dhimi lahaa. Hase yeeshee uu maqaalkani ka dhex abuurey xubnaha xisbiga dood ballaaran.
"Maanta ceeb ayuu xisbigu ku tallaabsaday ", sida ay qortay Linda Nordlund, guddoomiyaha ururka dhallin-yarada ee xisbiga Folkpartiet mar ay dhambaal ku qortay shaashadda twitter-ka saakadan. Nordlind ayaa ka soo hor-jeesatay in la xadido tirada soo-galootiga ee dalkan qaxa ku timaada:
- Maanta waxaa muuqata in caalamku uu holcayo, is xaalufin ka socota carrigaa daraadeed ayaa looga soo qaxaa dalka Suuriya. Marka in marxaladdaa iyadoo lagu jiro la yiraahdo waa in la dhimo tirada soo-galootiga qaxa ku yimaada maadaama aaney degmooyinku diyaar u aheyn sidii ey ku qaabili lahaayeen, waa arrin aan la qaadan karin iney ka timaado xubno ka tir-san xisbiga. Mar haddii uu xisbiga FP qaaday dhabbadii xisbiga Kristendemokraterna iyo Modarat-ka, ma ahan xisbi jirtitaankiisu uu xaq yahay.
Su'aashan ayaa ah mid maalmahan dambe si aad ah looga hadal hayey xisbiga dhexdiisa. Kulanka ey xubnaha xisbiga dalka u metelaa yeelan doonaan gabagabada sannadkan ayey howlaha looga fadhiyaa ka mid yihiin sidii loo ansixin lahaa siyaasad loo mideey-san yahay ee is-dhex-galka. Dhowaantan ayay ahayd kolkii uu guddi xisbigu u saaray, isla-markaana taageero ka haysta hoggaamiyaha xisbiga FP Jan Björklund soo ban-dhigeen qodobbo ey ka mid yihiin in cidda qaadanaysa dhalashada dalka laga qaado imtixaan dhanka luuqadda ah, in lagu xiro in cidda reer keensanaysa ay masuuliyad ka qaadi karto masruufkeeda iyo sidoo kale in la kordhiyo bixinta deggenaanshaha ku-meel-gaarka ah sannadaha ugu horeeya ee shakhsigu dalkan ku sugan yahay.
Hase yeeshee aanu hoggaamiyaha xisbiga FP Jan Björklund aanu doonayn in la xadeeyo tirada soo-galootiga dalkan qaxa ku yimaada. Isagoona carrabka ku adkeeyay in la ilaaliyo xeerarka magan-gelyo doonka ee dalka u deg-san:
- Hase-yeeshee sidii loo hagaajin lahaa waa in is-bedello balballaaran lagu tallaabsado ee la xiriira howlaha is-dhex-galka, si ey dadyoowga dalka yimaadaa si dhakhsiya ugu galaan suuqa shaqada oo ey noloshooda u kaafiyi lahaayeen, halkii ey uga noolaan lahaayeen taageero dhaqaale iyo iney bulshada bannaanka ka joogaan.
Xisbigaaga ayey ku jiraan xubno si aad ah uga dhiidhiyey fikirrada saaka ey ku soo ban-dhigeen war-geeyska DN xubno xisbiga ka tir-san. Sideey kuula muuqataa iney dood noocaasi ah ka dhex socoto xubnaha xisbiga gudihiisa?
- Waxaan aamin-sanahay in doodaha noocaasiya ey halkooda ka sii socdaan. Muddo ayaa daboolku saarnaa. Waddan xor ah waa in doodaha noocani ah ey la soo ban-dhigi karo, sida uu sheegay Jan Björklund.